अनौठो सौन्दर्य प्रतियोगिता मिस कन्डोम ! – Saurahaonline.com
अनौठो सौन्दर्य प्रतियोगिता मिस कन्डोम !
संसारभर बिभिन्न खाले सौन्दर्य प्रतियोगिता हुने गर्दछ । अलग अलग जाति र स्थान विशेषका रुपमा पनि सौन्दर्य प्रतियोगिता हुने गर्दछ । नेपालमा पनि बिभिन्न जाति,वर्ग स्थान विशेष सौन्दर्य प्रतियोगिता हुन्छन् ।
प्रतियोगितामा सहभागी सुन्दरीहरुलाई बिभिन्न स्थानको भ्रमण गराउदै सुरक्षित यौन सम्पर्कको बारे जनचेतना जगाउने काम गरिन्छ । प्रतियोगितामा कन्डोमलाई बेलुन जस्तै गरि फुलाउने प्रतिस्पर्धा समेत गरिन्छ । साथै प्रतियोगीले निःशुल्क कन्डोम बढ्ने काम समेत गर्दछन्। थाईल्याण्डमा बढ्दो असुरक्षित यौन सम्पर्कलाई रोक्न उक्त प्रतियोगिता गर्ने गरिन्छ ।‘ –एजेन्सी